Pilina tsy maha-bevohoka : Azo antoka tokoa ve ?
Karazana fanafody fihinanana, natao hisoroka ny fihaonan’ny tsirinaina lahy sy ny tsirinaina vavy, ao anatin’ny 72 ora, ny « pillule du lendemain ». Toy ireny fanafody fanabeazana aizana ireny ihany, mifototra amin’ny tsiry mpanentana ny fomba fiasan’ny « pillule du lendemain ». « Oestro-progestatif » no betsaka ao anatiny. Fa azo antoka ve izy ity ?
Tsy azo antoka
Tsy azo antoka 100% ny fandairan’ny “pillule du lendemain”. Raha toa ka misy fahatarana ny fadim-bolana, dia aleo manao “test de grossesse”. Vao mainka moa mihena ny heriny raha hanina im-betsaka ao anatin’ny volana iray. Noho izany, tsy misy afa-tsy ny fanaovana fanabeazana aizana ihany, no miaro amin’ny vohoka tsy nirina.
Tahaka ny zavatra rehetra, raha toa ka hanina matetika na miverimberina loatra ny “pillule du lendemain”, dia mety hitarika fiantraika any amin’ny vatana. Isan’izany ohatra ny hatavezana. Ankoatra izay, satria ny tsiry mpanentanana no tena miasa ao anatiny dia mety hitarika fikorontanan’ny tsingerim-bolana ny fihinanana azy ka tsy ho fantatra mazava ny fotoana mahalonaka na hiverenan’ny fadim-bolana. Ary ny farany, izay tsy bitika indrindra, mety hiteraka vohoka an-tsoso-koditra ny “pillule du lendemain” raha toa ka hanina matetika loatra.
Isaorana ny dokotera Robert Razafindramananana